आँखाको समस्यासँग जोडिएका यी ९ लक्षण त छैनन् ? तत्काल गर्नुस् परीक्षण - Everest Dainik - News from Nepal
आँखाको समस्यासँग जोडिएका यी ९ लक्षण त छैनन् ? तत्काल गर्नुस् परीक्षण
आँखा हाम्रो सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो । आँखा कमजोर भएपछि यसको असर व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा नै पर्न सक्छ । त्यसैले आँखासँग जोडिएका कतिपय लक्षणहरुलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।
आँखाको नियमित परीक्षण गरिराख्नु पर्छ । अर्कोतर्फ आँखासम्बन्धी तल लेखिएका समस्या भएमा समेत तत्काल नै आँखा परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
१ यदि धेरै टाढा वा नजिक हेर्दा धमिलो देखिन्छ । पत्रपत्रिका एवम् किताब पढ्न गाह्रो भएमा ।
२ राति र बिहान ठिक सँग देख्न नसकिँदा ।
३ कम्प्यूटरमा शब्द धमिलो र आँखा एवम् टाउको दुखेमा ।
४ यदि अध्याँरो ठाँउबाट उज्याँलोमा हेर्दा समस्या र रातिमा गाडी चलाउँदा गाह्रो भएमा ।
५ थोरै समयमै पत्रपत्रिका पढ्दा आँखा दुख्ने, थकाई र जलन हुन लागेमा ।
६ यदि बिना कारण टाउको दुख्ने र आँखाको वरिपरि दुखाई भएमा ।
७ आँखा धेरै सुख्खा हुने र बारम्बार झिम्काउनु पर्दा ।
८ बिना कारण आँखा रातो हुने, जलन र धेरै चिलाउँने हुँदा ।
९ कुनै वस्तुलाई देख्दा आँखा दुख्ने, चक्कर लाग्ने समस्या भएमा ।
ट्याग्स: Eye problem